Samsung na-emepụta Touch Bar nke ọhụrụ MacBook site na Samsung ma ọ gaghị abụ naanị ya Akụkọ akụrụngwa
Samsung bụ ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ mgbe niile. Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ ndị na-eji akụrụngwa ọ na-arụ maka ekwentị, kọmpụta, friji ... Samsung's semiconductor company bụ nkewa ahụ na - enweta ọtụtụ ego maka ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ọbụlagodi karịa nkewa ekwentị. Apple adaberewo ọtụtụ oge na ụlọ ọrụ Korea n'agbanyeghị na ọ bụ ndị na-agba ya aka, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ndị dị mma, Samsung bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ole na ole na-enye ya na Apple maara ya na ọ bụ ya mere ọ ji aga n'ihu ịtụkwasị obi kachasị na ụwa nke telephony, maka iPhone components na maka ihe Mac.
Izu gara aga Apple gosipụtara MacBook Pro ọhụrụ, ngwaọrụ ndị a na-enye dị ka ihe ọhụrụ, na mgbakwunye na ọmarịcha mma, ihuenyo mmetụ OLED nke Apple chọrọ ka arụpụtaghị anyị karịa nke ugbu a. Ihuenyo mmetụ aka a na-enye anyị ozi ndị ọzọ gbasara ihe anyị nwere ike ime nke ngwa ahụ, ka anyị wee ghara iji oke ahụ mee ya, anyị na-pịa nhọrọ nke pụtara na ọ bụ ya. Ihuenyo a bụ Samsung, ihuenyo nke ga - abụ ọkwa dị na ọtụtụ laptọọpụ n’oge na - adịghị anya, ọ bụrụ na ọ na - arụpụta.
Mana ọ dị ka mmekọrịta nke Apple na ụlọ ọrụ Korea ga-ekwekwa ka Samsung rụpụta ya OLED ngosipụta nke ọzọ MacBooks, n'ikpeazụ ịhapụ teknụzụ LCD n'akụkụ ma họrọ maka teknụzụ OLED, nke na-enye anyị agba ndị ọzọ kwesịrị ekwesị ebe nwa ojii dị ọcha na ọcha dị ezigbo mma. Tụkwasị na nke ahụ, oriri batrị dị nnọọ ala na ụdị ihuenyo a. Ugbu a Apple na-anwale ha iji hụ arụmọrụ ha na-enye ma ọ ga-abụ na ha ga-erute ụdị ọhụrụ ndị ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ọ bụ Samsung na-arụ Ogwe Aka nke MacBook ọhụrụ ma ọ gaghị abụ naanị ya
Hooooooo ụlọ ọrụ chọrọ ire. Kedu ihe dị ka ihe ọhụrụ. Mepee stere ochie ma lelee ihe dị iche iche nke ihe mejupụtara ya.
Nwoke a hụrụ ihe nkiri na esemokwu n'anya, mbipụta ya dị ka nke ahụ. Ma ozi ọma nwere ihe ọ bụla ma ọ bụ ọha na eze ndị doro anya ma ọ bụ echiche efu iPhone 8
Site na ihe m huru, ihe gi dicha mmasi, nihi na iguru ha.
Instapaper na-ahapụ usoro ndenye ego a kwụrụ ụgwọ ma bụrụ n'efu